FSX - FSX ရေနွေးငွေ့ Edition ကို
ပျောက်ဆုံးနေ terminal ကိုအဆောက်အဦးများ
မေးခွန်း ပျောက်ဆုံးနေ terminal ကိုအဆောက်အဦးများ
1 months ago2တစ်နှစ် #1307 by tharat
ငါအချို့သောလေဆိပ် (အဓိကအားဖြင့်အမေရိကန်လေဆိပ်) သို့ပျံသန်းအခါဆိပ်ကမ်းနှင့်အထွေထွေလေဆိပ်ရှုခင်းပျောက်နေသည်။ ဒီအတှကျသိပြင်ဆင်ချက်ရှိပါသလား?
1 months ago2တစ်နှစ် #1311 by donniganc10
ဦးယျ senery အတိမ်အနက်ကိုကြည့်ရှုရန် settings ကို check လုပ်ထားပြီ
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1339 by jduca
ငါရသော Addon ရှုခင်းဝန်အမိန့်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းပေးသောအလားတူပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကို Config အယ်ဒီတာနှင့်ပြီးသောအမှုအရာဝန်အတွက်နိုင်ရန်အတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုအမည်ရှိအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်တစ်ခုရရှိရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကံကောင်းပါစေ။
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1340 by jduca
ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ထို program ၏နာမတော်ရှုခင်း Config Editor ကိုဖြစ်ပါတယ်။
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1341 by tharat
ယခုတွင်ငါသည်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ် jduca Thank you!
ဖိုရမ် Access ကို
ခွင့်မပြု: reply ရန်။
ဘုတ်အဖွဲ့အုပ်စုများ Rikoooo အကြောင်း - ကွိုဆိုနယူးင်များ - အကြံပြုချက် Box ကို - အသိပေးကြေငြာခြင်း ပျံသန်းမှုရေး Simulator ဖိုရမ် - FSX - FSX ရေနွေးငွေ့ Edition ကို - FS2004 - Prepar3D - X-Plane မီဒီယာ - Screenshots - ဗီဒီယိုများ လေယာဉ်ရုံ Talk ကို - Fly Tune - အဘယျသို့အဘယ်မှာဒီနေ့သင်ပျံသန်းခဲ့ - ရီးရဲလ်လေကြောင်း အခြားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ရေး Simulator - လေယာဉ်ခရီးစဉ်ဂီယာပျံသန်း Simulator ကို - - FlightGear အကြောင်း - DCS တွဲ - benchmark Sims
0.612 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်